चर्चीत पत्रकार ऋषि धमलाको रङ्गीन भिडियाे सार्वजनिक धमला तनाबमा ( हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो) – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/चर्चीत पत्रकार ऋषि धमलाको रङ्गीन भिडियाे सार्वजनिक धमला तनाबमा ( हेर्नुहोस् लाईभ भिडियो)
पत्रकार ऋषि धमलाले हिरोइनहरुको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अन्तर्वार्तामा सधैँजसो चासो दिने गर्छन् । उनै धमलाको श्रीमति पनि कलाकार हुन् । एलिजा गौतमसँग वैवाहिक जिवनमा बाँधिएका धमलाले आफ्नो श्रीमतिले एक फिल्मलाई दिएको बे डसि न देखेर रि सा एका छन् । धमलाले एक अन्तर्वार्तामा पत्रकारसँग रि साउँ दै कलाकारले बे डसि न दिनु सामान्य भएको बताएका छन् ।के भन्छन् धमला ?: प्रायः नेताहरुका अघिपछि दौ डिरहने पत्रकार ऋषि धमलालाई फिल्मप्रति खासै ल गाव थिएन । तर, श्रीमतीले नै रहर गरेपछि के लाग्यो ? श्रीमती एलिजा गौतमको रहर पुरा गर्न ऋषिले ‘अनुराग’ फिल्म निर्माण गर्दैछन् ।
डेढ करोडमा बन्न लागेको फिल्ममा ऋषिका साथै उनकी क्यानाडामा बस्ने सासुको पनि लगानी रहेको छ । ‘कान्छादाई गाना बजाइदेउन‘’ बोलको डान्सिङ गीतमा एलिजा ह ट अवतारमा देखिन्छिन् । यस्तो लाग्दैन कि उनी दुई बच्चाकी आमा हुन् । उनलाई कार्टुन्ज क्रुका सरोज अधिकारीले साथ दिएका छन् । गीतले अहिलेसम्म लाखौँ भ्यूज पाएको छ । गीतको मेलोडी रुचाइएको छ भने सरोजको डान्सको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । एलिजालाई भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केहीले उनको मिहिनेतको सह्राहना गरेका छन् भने धेरैले उनी हिरोइन बन्न योग्य नभएको टि प्पणी गरेका छन् । भिडियो तल छ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******